Wararkii ugu dambeeyay laba qarax oo aroortii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay laba qarax oo aroortii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho
Laba qarax oo miino ah ayaa gelinkii hore ee saakay ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, iyadoona qaraxyadaasi ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxayadaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa la sheegay in midka koowaad lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo saarnaa gaari dagaal islamarkaana maraayay gudaha degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho.
Mahad Maxamed Sharaawe oo ah xoghayaha degmada Dayniile oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacantay ilaa labo askari oo ka mid ahaa ciidamo saarnaa gaariga.
Dhaawaca labadaasi askari ayaa markaasi kadib loo qaaday Isbitaal ku yaalo degmada Dayniile, waxaana markii ay ciidankaasi tageen isbitaalka qaraxii labaad lagula eegtay irida hore ee Isbitaalka.
Waxaa qaraxaasi labaad ku geeriyootay gabar dhalinyaro ahayd oo ka shaqeeysa Isbitaalka oo xilliga uu qaraxa dhacaayay taagneyd irida isbitaalka, iyadoona sidoo kale qaraxaasi uu dhaawac kasoo gaaray wadihii gaariga dhaawaca lagu qaaday.
Ilaa iyo haatan lama oga, sida qaraxyadaan labada ah loogu diyaariyay labadaasi meelood oo ciidamada loogu eegtay, iyadoona maamulka degmada Dayniile uu hore u sheegay inay wax ka qaban doonaan ammaanka degmadaas.
Si kastaba ha ahaatee, Xarakada Al-shabaab ayaa mudooyinkii ugu dambeysay laba jibaaray qaraxyadda iyo weerarada ay ka geysanayaan qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana inta badan qaraxyadaasi qasaare xoogan kasoo gaartaa dadka shacabka ah oo ka agdhaw goobaha ay qaraxyaddu ka dhacaan.